Manao Fihetsiketsehana Mitady Fanampiana Ara-Tsakafo Ny Tantsaha Filipiana Tratran’ny El Niño · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Mey 2016 5:29 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, 日本語, čeština , Deutsch, Español, English
Noho i El Niño, ilay tsiokan-toetrandro mitarika tsy fisian-drano sy fahamainan'ny tany notarihan-drano any amin'ny faritra ambanivohitra ao amin'ny firenena, dia tsy afa-namafy voa intsony ny tantsaha tao anatin'ny volana maro. Tamin'ny fanombohan'ity taona ity dia nambara tany amin'ny faritany maro ao Mindanao fa tratran'ny antambo ry zareo, izay midika hoe mahazo mampiasa vola manokana hanomezana sakafo fanampiana ny mponina voakasik'izany ny manam-pahefana eo an-toerana.
Fa tamin'ny Marsa teo, betsaka ny tantsaha nitaraina fa mbola tsy nozaraina tany amin'ny tanànany ny vary omen'ny governemanta. Mihoatra ny 4000 ny tantsaha nivory [mg] teo anoloan'ny trano fanatobiam-barin'ny governemanta any an-tanànan'i Kidapawan mitaky ny famoahana ny vary sy ny vola fanampiana iatrehana ny antambo. Saingy fanaparitahana an-kerisetra ny tantsaha nanao barazy tamin'ny 1 avrily no nataon'ny polisy fa tsy nizara vary.
Tao Mindanao avaratra, manazava ny fiantraikan'ny El Niño amin'ireo vondrom-piarahamonina ambanivohitra ny mpitarika ny tantsaha Ireneo Udarbe :